Ukutya kwaseBrazil-Nciphisa ubunzima ngokulula, ngokuSebenzayo nangokuLumkileyo
Ukutya kwaseBrazil kukungoThixo kuphela kwabo bantu bangenako ukwahlukana nokutya okumnandi. Umzekelo, ngenyama, amaqanda kunye nentlanzi. Ewe, ukutya kunemiqathango, kodwa akubalulekanga njengakwiindlela ezininzi zokutya ezingqongqo kunye neenkqubo zesondlo.
Ke, ukuba awukenzi isigqibo malunga nokutya, kodwa kwangaxeshanye uyakuthanda ukutya, zive ukhululekile ukukhetha ukutya kwaseBrazil.
Ukulunga kunye neengozi zokutya zaseBrazil
Ukutya kuthandwa ngakumbi ngabasetyhini abahlala ekhaya kwaye bangasebenzi. Ukulula kunye nokulula kokupheka kuyathandeka. Kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, awudingi ukuchitha imali eninzi kuthengwa. Ungazithenga kwivenkile ekufutshane.
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuya kukutya, kuya kufuneka ubonane nogqirha, kuba nakuphi na ukutya kunokungqinelana.
Unokugqiba isigqibo malunga nexesha lokutya. Ukutya kwaseBrazil kuyilelwe iiveki ezimbini okanye iiveki ezine. Olunye udibaniso lokutya kukuba awuzukuyila imenyu. Sele icwangciselwe lonke ixesha lokutya. Oku kuyakwenza lula ubomi bakho kwaye konge ixesha.
Ukutya kwaseBrazil kukutya okuneeprotehydrate ezisezantsi, ukutya kwekhalori yonke imihla kuncitshisiwe.
Imigaqo yesondlo kunye neemenyu zokutya
Uya kudinga ukutya kancinci. Oku kuphakamisa ukuba ngoku inani lokutya ngosuku akufuneki libe ngaphantsi kwesine. Kungcono ukuba utye kahlanu.
Ukutya kuthathwa ngokungqongqo kwaye kunzima, kuthathelwa ingqalelo inyani yokuba uya kutya inyama namaqanda. Akukhuthazwa ukuba utshintshe ukutya kwiindawo kwaye ubeke okunye ukutya kwabanye, kungenjalo awukwazi ukufezekisa umphumo oyifunayo.
EBrazil ukutya icebisa ukuba naziphi na iziqholo kunye nokunye ukutya okunokubangela umdla wakho kufuneka kususwe ekutyeni kwakho. Kwakhona akuvumelekile ukutya inyama yokutshaya, izitya eziswiti kunye nezitya eziqholiweyo. Iimbotyi kufuneka zisikwe umva ngexesha lokutya. Ukuba uzityile ngalo mhla, kuya kufuneka ungafaki isonka kukutya.
Ngexesha lokutya, kubalulekile ukuthatha i-vitamin C, kodwa kungcono ukhethe i-vitamin complex ngokwakho, ngokubonisana nogqirha wakho. Kwakhona khumbula ukusela iziselo ezininzi.
Eyona nto kugxilwe kuyo kukutya, iisobho ezilula, imifuno, iziqhamo kunye nemifuno. Kuvumelekile ukusela amanzi aqhelekileyo angenayo i-carbonated mineral or any juice.
Kwiiveki ezimbini ngokutya okunjalo, unokulahleka malunga neekhilogram ezintlanu. Cinga ngesampulu yemenyu oya kuyilandela ngexesha lokutya kwakho. Olu luhlobo oluqinileyo lokutya, olubandakanya iiproteni-amaqanda, inyama kunye nentlanzi-njengesiseko sokutya.
Imenyu yokutya yaseBrazil
Isidlo sakusasa: iqanda elinye elibilisiweyo, iapile enye entsha, iglasi yekofu yendalo.
Isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa ziya kufana: iapile enye entsha kunye neqanda elinye elibilisiweyo.
Isidlo sakusasa: amaqanda amabini abilisiweyo.
Isidlo sasemini: ikhulu leegrama zenyama yenkomo ebilisiweyo, isipinatshi esincinci.
Isidlo sangokuhlwa: iqanda elinye elibilisiweyo kunye nespinatshi.
Isidlo sakusasa: iqanda elinye elibilisiweyo.
Isidlo sasemini: ikhulu leegrama zentlanzi ebilisiweyo yolwandle kunye neetumato eziphakathi.
Isidlo sangokuhlwa: amaqanda amabini abilisiweyo kunye neglasi yekofu yendalo.
Isidlo sakusasa: iqanda elinye elibilisiweyo kunye neglasi yekofu yendalo.
Isidlo sasemini: ikhulu leegrama zentlanzi yaselwandle ebilisiweyo kunye netumato enye encinci.
Isidlo sangokuhlwa: ikhulu leegrama zentlanzi eyosiweyo ethambileyo kunye nesaladi yemifuno.
Isidlo sasemini: ikhulu leegrama zenyama ebilisiweyo ebilisiweyo, ikhukhamba enye ephakathi kunye neglasi yekofu yendalo.
Isidlo sangokuhlwa: iigram ezingamakhulu amabini zenyama ebilisiweyo ebilisiweyo, iglasi yekofu yendalo.
Isidlo sasemini: ikhulu leegrama zenkukhu ebilisiweyo engenamafutha ngaphandle kwamanqatha nolusu, ikhukhamba enye ephakathi kunye netumato enye ephakathi.
Isidlo sangokuhlwa siyafana nesidlo sasemini. Kuya kufuneka usele enye iglasi yekofu yendalo.
Isiphelo sokutya saseBrazil
Njengoko ubona, imenyu inzima kwaye kunzima kakhulu ukugcina ukutya okunjalo. Ke ngoko, ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokutya, cinga ngononophelo malunga nokuba ungabambelela kude kube sekupheleni. Ngaphandle koko, ubeka emngciphekweni wokonakalisa impilo yakho kwaye ungafumani inani elifunayo.
Kukho enye indlela eyahlukileyo yokutya eBrazil egxile kwiziqhamo, imifuno, imifuno kunye neencindi zayo. Kodwa imenyu yakhe nayo ingqongqo, nangona kuya kufuneka utye kathathu ngemini.
Khumbula ukuba umthambo olungeleleneyo uluncedo kakhulu kwimpilo yakho, ngakumbi ngexesha lokutya, xa unciphisa umzimba kwaye ulusu lwakho luba buthuntu.
Ukutya okusempilweni kokunciphisa umzimba
Ungayifaka njani ingqondo ngokwasengqondweni ukuze unciphise umzimba
Edlulileyo Ukutya kwamanzi - Ukuphulukana ne-5 kg ​​ngaphandle koxinzelelo
Okulandelayo Konke malunga nokuqubha ukunciphisa umzimba
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,756.